Liker, Sugar & Jet Li – Petunity
တယ်ရီယာနဲ့ စပန်နီရယ်စပ်တဲ့ ခွေးလေး ၃ ကောင်နဲ့ အားလုံးကို မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်။
Liker၊ Sugar နဲ့ Jet li ပါ။
Sugar က ခွေးအမလေး ပါ။ Sugar နဲ့ Jet Li တို့က အသက် ၅ နှစ်ဝန်းကျင်ရှိပါပြီ။
Liker ကတော့ အသက် ၂ နှစ်ထဲမှာပါ။ ဒါ့အပြင် Liker က မြန်မာခွေးအမျိုးအစားလည်း စပ်ပါသေးတယ်။
ကျန်းမာရေး ရာဇဝင်။ ကျန်းမာပါတယ်။
ပုံမှန် သန်ချပေးခြင်း၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခြင်း၊ ကျန်းမာပြီး အာဟာရပြည့်ဝစွာနေထိုင်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
ကာကွယ်ဆေး။ ကာကွယ်ဆေး ထိုးဖူးပါတယ်။
Liker နဲ့ Jet Li တို့ကမျိုးဆက်မပွားနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်။ Sugar ကတော့ မဆောင်ရွက်ရသေးပါ။ သားအိမ်ထုတ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပမယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီတခါကိုယ်ဝန်ထက်ဆောင်ရင် မမွေးနိုင်ပဲ အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ ဆရာဝန်က ပြောထားတယ်လို့သိရပါတယ်။
ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရာ။ အကုန်စားပါတယ် အမဲသားကလွဲရင်။ အပြင်ထွက်ရင်တအားဆော့တယ် လူနားကပ်ချင်တယ် တူတူအိပ်ချင်တယ်။
မွေးစားဖို့ စိတ်ဝင်စားရင် လိုအပ်တဲ့ မေးခွန်းလေးတွေ ဖြေဆိုရန်အတွက် Petunity messenger ကိုလာခဲ့ပါနော်။
ပက်ယူနတီ၏မေးခွန်းများကို လာရောက်မဖြေဆိုခင် အောက်ပါမေးခွန်းများကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
🐣 🎀 လိုအပ်တဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုမျိုး ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့ အဆင်ပြေပါသလား။
နောင်တစ်ချိန်တွင် မွေးဖွားလာမည့်ကလေးများကို စောင့်ရှောက်ပေးဖို့ အဆင်ပြေမပြ ကြိုတင်စဉ်းစားဆောင်ရွက်ဖို့တွေးထားတာမျိုး ရှိပါသလား။ 🎀 🐣
စိတ်ဝင်စား ဖောင်ဖြည့်ကြသူများထဲမှ ပိုင်ရှင်ကသူနဲ့အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်မယ်ထင်တဲ့သူကို ရွေးချယ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Would you be my new owner?
Name: Liker (Male,2years old), Sugar (Female,5years old), Jet Li (Male,5years old)
Breed: Sugar & Jet Li are Terrier & Spaniel Mixed. Liker has the blood of Terrier, Spaniel & Burmese.
- Regular deworming and giving vaccinations, healthy lifestyles are necessary for them
Vaccinations: Not updated
Neutering/ Spaying: Yes for Liker & Jet Li, Not yet for Sugar (Needed to Spay. According to doctor if she becomes pregnant this time, she would not be able to give birth.)
Favourite: All except beef, love to go out, playful, attached to human.
DM us if you'd like to adopt one of them. There'll beaform to fill out. Before registering, below questions are needed to think beforehand.
🐣 🎀 Would you be happy to provide the necessary health care for the pet?
What would be your plan when the pet breeds in near future? 🎀 🐣
We filter out your answers and the owner chooses among the candidates. Thank You!
အိမ်မှာလည်းအရင်က ဖွေးဖွေးဆိုပီးတစ်ကောင်မွေးဖူးပါတယ်ရှင်ဖွေးဖွေးလေးကကျန်းမာရေးချိူ့တဲ့ပီးသေသွားလို့ပါ အခုညီမလည်းsugarလေးကိုမြင်ပြီးမွေးစားချင်လို့ သေချာလည်းစောင့်ရှောက်ချင်လို့ပါ အိမ်ကလူတွေကလည်းခွေးချစ်တက်တာနဲ့အနေတော်မို့သေချာလေးဂရုစိုက်မွေးမှာပါရှင်
Thu Hnin Eaint Chal
Han Min Nway Htun
အိမ်မှာ Poodle ခွေးမလေးတစ်ကောင်မွေးထားပါတယ်သူနဲ့တူတူအဖော်ရဖို့ ခွေးအမလေးတစ်ကောင်လိုချင်လို့ပါ သားလဲမစပ်စေချင်တာမို့ အဖော်တူတူဆော့ကြစေပြီး ကောင်းကောင်းမွေးပေးမှာပါ Sugar လေးလိုချင်ပါတယ်
Jet Li လေးက ပိုင်ရှင်ရှိသွားပြီမို့ Sugar လေးကိုမွေးစားချင်ပါတယ် Sugarလေးလဲ ပိုင်ရှင်ရှိနေပြိီဆိုရင် ပိုင်ရှင်မရှိတဲ့ခွေးလေးမွေးစားချင်ပါတယ် ခွေးလေးအရမ်းမွေးချင်လို့ပါ ဂရုစိုက်ပေးချင်တာရယ် ခွေးလေးနဲ့ဆော့ပေးချင်တာလဲပါ"တယ် Plsss
Jet Li လေးကို တကယ့် စိတ်ရင်းနဲ့မွေးစားချင်ပါတယ်
အရင်က Jessiဆိူတဲ့ ခွေးလေးမွေးဖူးပါတယ်
အဲ့တုန်းက ကိုယ်ပိုင်အိမ်နဲ့ခြံနဲ့မဟုတ်ပဲ အများနဲ့နေရတော့ ခွေးလေးကို မွေးထားရတာ အဆင်မပြေလို့ပါ
အဲ့တာနဲ့ ခွေးလေးကို စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ အကိုဝမ်းကွဲဆီ ပေးလိုက်ရပါတယ် အခုတော့ ကိုယ်ပိုင်အိမ်နဲ့ခြံနဲ့ဖြစ်သွားပြီမို့ Jet Liလေးကို တကယ့်စိတ်ရင်းနဲ့ မွေးစားချင်ပါတယ်
Jet Liက အရင်ခွေးလေးလိုပါပဲ အရင်ခွေးလေးကိုမပိုင်ဆိုင်ရတော့ပေမဲ့လဲ Jet Liလေးကိုတော့ပိုင်ဆိုင်ချင်မိပါတယ် စိတ်ရင်းနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန် တန်ဖိုးထားချင်ပါတယ်
တကယ်လဲ ခွေးလေးမွေးချင်နေတာကြာပါပြီ ဒီPostတွေ့တော့ ပျော်မိပါတယ် တွေ့တွေ့ချင်းပဲ ဆက်သွယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် အစားထိုးခြင်းမဟုတ်ပါဘူးနော် ငယ်ငယ်ထဲကခွေးလေးတွေဆိုအရမ်းချစ်တယ် အခုထိပါပဲ….ငွေကြေးအခက်ခဲရှိလို့သာ မမွေးဖြစ်တာပါ ။ Let Liလေးကိုတော့ မွေးစားချင်ပါတယ် စိတ်ရင်းနဲ့ပါ..။